Talatamaty Maty teo no ho eo ilay lehilahy nitsoraka tambany kamiao
Lehilahy iray manodidina ny 35 taona omaly no nitsoraka tao ambany kamiao sendra nandalo teny Talatamaty PK 10+200, RN 52 ka namoy ny ainy avy hatrany.
Araka ny fanazavan’ny kaomandan’ny borigadin’i Talatamaty dia kamiao avy any Mahajanga ho any Toamasina ity tra-doza ity. Tao amin’ny kodiarana aoriana an-kavanana no nitsoraka ilay lehilahy izay tsy mbola fantatra hatramin’ny fotoana nanoratana ny antony nanosika azy hanao izany. Naterin’ny zandary eny amin’ny hopitaly manara-penitra teny Anosiala ny razana taorian’izay. Nanohy ny fitadiavana ireo havany sy nanatanteraka ny famotorana kosa ireo mpitandro ny filaminana. Marihina fa tsy hitan’ilay mpamily mihitsy ilay lehilahy.